Ihe Baịbụl kwuru, Oge Ya Ọ̀ Gafeela? Ihe Sayensị, Ahụ́ Ike, na Baịbụl Gosiri
Ụlọ Nche | Nke 1 n'Afọ 2018
GỤỌ NKE Acholi Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Aukan Australian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Bassa (Cameroon) Batak (Dairi) Batak (Toba) Biak Bicol Bislama Boulou Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuukese Chuvash Cibemba Cinyanja Colombian Sign Language Croatian Czech Dangme Danish Digor Drehu Dutch Edo Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Finnish Sign Language Fon French Ga Garifuna Georgian German German Sign Language Greek Greenlandic Guarani Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (White) Hungarian Hungarian Sign Language Iban Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Italian Sign Language Jamaican Creole Japanese Japanese Sign Language Javanese Kabiye Kalanga (Botswana) Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Korean Sign Language Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marshallese Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mexican Sign Language Mizo Mongolian Moore Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngangela Nias Niuean Norwegian Nyaneka Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Polish Sign Language Ponapean Portuguese Portuguese (European) Punjabi Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Romany (Southern Greece) Romany (Vlax, Russia) Ronga Runyankore Russian Rutoro Samoan Sango Saramaccan Sepedi Sepulana Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Umbundu Urhobo Uruund Uzbek Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Oge Ya Ọ̀ Gafeela Ka Ò Kwuru Ihe Ndị Mmadụ Mechara Mata na Ha Bụ Eziokwu?
BAỊBỤL ABỤGHỊ AKWỤKWỌ SAYENSỊ, MA O KWURU ỌTỤTỤ IHE E MECHARA MATA NA HA BỤ EZIOKWU. LEE ỤFỌDỤ N’IME HA.
Eluigwe na ụwa, hà nwere mmalite?
E nwere mgbe ndị ọkà mmụta sayensị a ma ama kwetasiri ike na eluigwe na ụwa enweghị mmalite. Ma ugbu a, ha ekwetala na eluigwe na ụwa nwere mmalite. Ma, ọ bụ ihe Baịbụl kwuru kemgbe.—Jenesis 1:1.
Olee otú ụwa dị?
N’oge ochie, ọtụtụ ndị chere na ụwa dị larịị. Ma, n’ihe dị ka puku afọ abụọ na narị afọ ise gara aga, ndị ọkà mmụta sayensị bụ́ ndị Gris kwuru na ọ dị gburugburu. Ma, kemgbe ọtụtụ afọ tupu mgbe ahụ, Aịzaya bụ́ onye so dee Baịbụl kwuru na ‘ụwa dị gburugburu.’— Aịzaya 40:22.
Ihe ndị dị na mbara igwe, hà na-emebi emebi?
Onye ọkà mmụta sayensị, bụ́ onye Gris, aha ya bụ Arịstọtụl, nke biri ndụ n’ihe dị ka puku afọ abụọ na narị afọ atọ gara aga, kwuru na ọ bụ naanị n’ụwa ka ihe na-emebi emebi. Ọ sịrị na kpakpando ndị dị na mbara igwe emekataghị gbanwee ma ọ bụkwanụ mebie. Ndị mmadụ kwetara ihe a ruo ọtụtụ narị afọ. Ma, n’ihe fọrọ obere ka o ruo narị afọ abụọ gara aga, ndị ọkà mmụta sayensị kwuru na ihe niile, ma ihe ndị dị n’eluigwe ma ihe ndị dị n’ụwa, na-emebi emebi. Lord Kelvin bụ otu n’ime ndị ọkà mmụta sayensị kwetara na ihe niile na-emebi emebi. Ọ sịrị na Baịbụl kwuru banyere eluigwe na ụwa, sị: “Ha niile ga-akakwa nká dị ka uwe.” (Abụ Ọma 102:25, 26) Kelvin kwetakwara ihe Baịbụl kwuru, nke bụ́ na ọ bụrụ na Chineke achọọ o nwere ikike ime ka ihe ọ bụla ghara imebi ihe ndị o kere.—Ekliziastis 1:4.
È nwere ebe e kokwasịrị ụwa ma ọ bụ planet ndị ọzọ?
Arịstọtụl kụziri na e nwere ihe e ji kpakọta planet niile ọnụ. Ọ sịrị na akpakọtara ha, ha esie ike, nakwa na ọ bụ ụwa nọ n’etiti. Ma, n’ihe dị ka narị afọ atọ gara aga, ndị ọkà mmụta sayensị malitere ikweta na o nweghị ebe e kokwasịrị kpakpando, ụwa na planet ndị ọzọ ka ha ghara ịda. Ma, n’akwụkwọ Job e dere kemgbe ihe karịrị puku afọ atọ gara aga, e kwuru na o nweghị ihe Chineke “kokwasịrị ụwa na ya.”—Job 26:7.
BAỊBỤL KWURU IHE NDỊ BỤ ỊGBA NWERE IKE INYERE MMADỤ AKA N’IHE GBASARA AHỤ́ IKE N’AGBANYEGHỊ NA Ọ BỤGHỊ AKWỤKWỌ AHỤ́ IKE.
Ịkpọpụ ndị ọrịa iche.
N’Iwu Mozis, e kwuru ka a na-akpọpụ ndị ekpenta iche ka ha na ndị mmadụ ghara ịnọkọta. Ma, ndị dọkịta amaghị ihe a ruo mgbe ọrịa na-efe efe kpara mkpamkpa n’ihe dị ka narị afọ asaa gara aga. Ọ bụzi mgbe ahụ ka ha malitere mewe ya. Ọ ka na-abakwa uru taa.—Levitikọs isi nke 13 na nke 14.
Mmadụ ịkwọ aka ma o metụ ozu aka.
Tupu ihe dị ka afọ 1890, ọ na-abụkarị ndị dọkịta metụchaa ozu aka, ha aga gwọwa onye ọrịa, n’ebughị ụzọ kwọọ aka. Ihe a ha na-eme gburu ọtụtụ ndị. Ma, Iwu Mozis kwuru na onye ọ bụla metụrụ ozu aka adịghịzi ọcha. O kwudịrị ka onye ahụ were mmiri sụọ uwe ya, saakwa ahụ́ ya ka o nwee ike ịdị ọcha. Ihe ndị a Chineke gwara ha, na-eme ka mmadụ ghara ibute ọrịa.—Ọnụ Ọgụgụ 19:11, 19.
Ịnyụ nsị ebe na-ekwesịghị ekwesị.
Kwa afọ, afọ na-asagbu ihe karịrị ọkara nde ụmụaka. Ihe kacha akpata afọ ọsịsa a bụ nsị ndị mmadụ nyụrụ ebe na-ekwesịghị ekwesị. Iwu Mozis kwuru na onye chọọ ịnyụ nsị, o kwesịrị ịga ebe mmadụ na-anọghị, gwuo ala, ọ nyụchaa, ya ekpochie ya.—Diuterọnọmi 23:13.
Oge e ji ebi úgwù.
Chineke nyere iwu ka a na-ebi nwa nwoke ọ bụla a mụrụ úgwù n’ụbọchị nke asatọ. (Levitikọs 12:3) A chọpụtara na ihe na-eme ka ahụ́ nwatakịrị amụrụ ọhụrụ nwee ike ịkwụsị ịgba ọbara na-amalite ịrụ ọrụ nke ọma ma izu mbụ a mụrụ ya gachaa. N’oge Baịbụl, tupu e nwee ụzọ ọgbara ọhụrụ e si agwọ ọrịa, iche ka otu izu gachaa tupu ebie nwa ọhụrụ úgwù, na-eme ka ọ ghara ịnwụ.
Ịna-enwe obi ụtọ na-eme ka ahụ́ na-adị mmadụ mma.
Ndị na-eme nchọpụta gbasara ahụ́ ike na ndị ọkà mmụta sayensị kwuru na mmadụ ịna-enwe obi ụtọ, ịna-atụ anya na ihe ga-adị mma, ịna-egosi na obi dị ya ụtọ maka ihe e meere ya, nakwa ịna-agbaghara ndị mejọrọ ya, na-enyere mmadụ aka ahụ́ ana-adị ya mma. Baịbụl kwuru, sị: “Obi nke na-aṅụrị ọṅụ bara uru dị ka ihe na-agwọ ọrịa, ma mmụọ nke dara mbà na-amịkpọ ọkpụkpụ.”—Ilu 17:22.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Oge Ya Ọ̀ Gafeela Ka Ò Kwuru Ihe Ndị Mmadụ Mechara Mata na Ha Bụ Eziokwu?
Ihe Ndị E Dere na Baịbụl Ọ̀ Ka Bara Uru Taa?
Ihe Baịbụl Kwuru, Oge Ha Ọ̀ Gafeela?
1 Baịbụl Ga-enyere Gị Aka Izere Nsogbu
2 Baịbụl Ga-enyere Gị Aka Ịkwụsị Nsogbu
3 Baịbụl Ga-enyere Gị Aka Idi Nsogbu
Uru Ihe Baịbụl Kwuru Ga-abara Gị n’Ọdịnihu
Ụdị Dị Iche Iche Họrọ ụdị nke ị ga-ewere ỤLỌ NCHE Baịbụl Ọ̀ Ka Bara Uru Taa
Nke a na-egere egere Họrọ ụdị nke ị ga-ewere ỤLỌ NCHE Baịbụl Ọ̀ Ka Bara Uru Taa
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ ỤLỌ NCHE Baịbụl Ọ̀ Ka Bara Uru Taa
Baịbụl Ọ̀ Ka Bara Uru Taa
ỤLỌ NCHE Baịbụl Ọ̀ Ka Bara Uru Taa